Qof Kasta Ma Arki Karo Websaydhkaaga | Martech Zone
Qof Kasta Ma Arki Karo Websaydhkaaga
Thursday, April 25, 2019 Thursday, April 25, 2019 Virginia Jacko
Maamulayaasha bogagga ganacsiyada badan, yar iyo weyn, xilligan la soo dhaafay wuxuu ahaa jiilaalka niyad jabkooda. Laga bilaabo Diseembar, daraasiin qolalka farshaxanka ee magaalada New York ayaa loogu magac daray dacwadaha, iyo qolalku may ahayn keli. Boqolaal dacwadood oo dacwado ah ayaa dhowaan laga gudbiyay ganacsiyada, hay'adaha dhaqanka, kooxaha u doodista iyo xitaa ifafaalaha caanka ah ee Beyonce, oo websaydhka waxaa loogu magac daray dacwad-ficil ah la xareeyay Janaayo.
Nuglaanta ay wadaagaan? Websaydhadaani ma ahayn kuwo ay heli karaan dadka indhoolayaasha ah ama aragga naafada ka ah. Dacwadaha natiijooyinka ka soo baxay waxaa soo gudbiyey dacwad-oogayaasha si ay ugu qasbaan ganacsiyada inay keenaan degelladooda internetka u hoggaansamida Sharciga Naafada Mareykanka, taas oo ka dhigaysa kuwo ay heli karaan indhoolayaasha iyo dadka araga naafada ka ah.
Haddii aad ku shaqeyso degel qayb ka mid ah shaqada ururkaaga, su'aasha ay tahay inaad weydiiso waa:
Websaydhkaygu si buuxda ma loo heli karaa?
Miyaad Xidhineysaa Macaamiisha Fursadda?
Dadka indhoolayaasha ah iyo kuwa araga naafada ka ah sida aniga ayaa inta badan laga jaray - sikastaba ha u kastee ha noqotee - qayb weyn oo nolosha ka mid ah oo ay u badan tahay inaad u qaadanayso. Walaac ku saabsan ardayda araga la 'ee laga xiro barashada internetka ayaa igu qasbay inaan qoro maqaal ku saabsan baahida loo qabo nashqadeynta guud ee 8-da Maajoth 2011 edition oo ka mid ah Dabeecadda Waxbarashada Sare, gabal loogu talagalay in kor loogu qaado wacyiga barayaasha iyo kooxahooda IT-ga.
Indhoolayaasha, ubaahan marin u helka degelka - iyo U hoggaansamida ADA taas oo xaqiijin karta - waxay ku fidsan tahay dhammaan qaybaha, laga bilaabo waxbarashada illaa ganacsiyada, adeegyada, hay'adaha dhaqanka iyo ururada kale. Haddii aad leedahay aragti, ka fikir sida aad ugu tiirsan tahay internetka ee aad ugu jirto nolol maalmeedkaaga shaqo iyo nolosha guriga. Immisa degel ayaa booqda maalin caadi ah? Qiyaas sida ay noqon doonto haddii aadan si fudud u heli karin bogaggaas, oo ku dhowaad maalin kasta, waxaad la kulantay dhowr waxyaalood oo aadan si fudud u sameyn karin.
In kasta oo uu sharciga jiro, marin u helka webka oo cadaalad ah iyo sinnaan ayaa lagu kala bixi waayey. In lagaa xidho, loo diido inaad gasho boggaga internetka ee ganacsiga, ganacsiga, iyo noloshu lafteedu ku tiirsan yihiin adduunkeenna maanta, waxay kicin kartaa dacwoodayaasha indhoolayaasha ah inay maxkamadda aadaan Markay dacwad-oogayaashu dacwad furayaan, waxay sidaas ku daliishanayaan ADA. Waxaad u xasuusan kartaa ADA inuu yahay sharciga ka caawinaya kursi curyaanka ku xiran inuu galo dhismayaasha dadweynaha, laakiin intaas kuma koobna.
Sharciga Naafada Mareykanka (ADA) wuxuu aqoonsan yahay dadka qaba oo dhan naafada ayaa leh xuquuqda helitaanka loo siman yahay, oo ay kujiraan indhoolayaasha iyo araga naafada ah, tanina waxay ka dhigan tahay helitaanka warbaahinta dhijitaalka ah iyo khadka tooska ah marka lagu daro meelaha jirka. Waxay udub dhexaad u tahay arinta daadadka hadda jira ee ku habboon ADA.
Dadka indhoolayaasha ah iyo kuwa araga naafada ka ah waxay adeegsadaan akhristaha si ay nooga caawiyaan inaan dhex maro oo aan u isticmaalno bogagga internetka. Akhristayaashu waxay kala gartaan waxa shaashadda ku jira oo si elektaroonig ah kor ugu aqriya, taas oo noo suuro gelinaysa inaan marinno wixii aynaan arki karin. Waa tiknoolajiyad heer sare ka dhigaysa goobta lagu ciyaarayo.
Laakiin, macno ahaan waannu xiran nahay markii aan la kulanno degello internet oo aan koodh lagu qorin si aan innaga u gudubno. Haddii aad isku dayeyso inaad dalbato raashinka, ballansato qol hudheel ama aad gasho websaydhka dhakhtarkaaga oo goobta loo diyaarin marin u heliddeeda, waad dhammaysay. Qiyaas inaad iskudayeyso inaad howshaada qabato adigoon awoodin inaad shaashadda aqriso; taasi waa waxa maalin walba soo food saara indhoolaha iyo shaqaalaha naafada ka ah.
Ka Hortag Goobtaadu Inay Noqoto Ciribta Achilles
Ganacsi ballaaran, u dhaqaaqida dhanka hagaajinta waa toos. Waxay leeyihiin ilo iyo u hoggaansanaan, sharci iyo shaqaale IT si ay si deg deg ah ula soo galaan boggooda internetka si waafaqsan shuruudaha ADA. Waxay dib u qaabayn ku sameyn karaan astaamaha isla markaana si dhakhso leh dib ugu qori karaan koodhka si ay u daboolaan baahiyaha soo booqdayaasha indhoolayaasha ah, iyaga oo siinaya marin u helid iyo asal ahaan fidinta soo dhaweynta.
Laakiin, ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah iyo ururada ayaa inta badan caqabad ku ah kheyraadka. Wareysiyada wararka, milkiilayaasha meheradaha yaryar iyo kuwa dhexe ee looga yeeray ADA dacwadaha waxay ku sheegayaan inay dareemayaan nugul.
Tan waxaa si fudud wax looga qaban karaa faa iidada qof walba. La-tashiga kooxaha u ololeeya dadka indhoolayaasha ah iyo kuwa araga naafada ka ah waxay bilow weyn u noqon kartaa ururadan, waxaana jira dhowr tilmaam oo ay tahay in maanka lagu hayo maaddaama ay bilaabayaan geeddi-socodka lagu gaarayo u hoggaansanaanta ADA ee boggooda internetka.
Waxa Aad Sameyn Karto Si Aad U Hubiso In Websaydhkaaga La Adeegsan Karo
Maxaad sameyn kartaa haddii aad leedahay ganacsi oo aad rabto inaad ka fogaato in lagugu qasbo inaad u hoggaansamto dacwada madaniga ah? Kahortaga dhibaatada way ka qiimo yartahay waana talaabada caqliga leh:
La shaqee sarkaalka u hoggaansankaaga ama xirfadlahaaga si aad u hubiso in websaydhyadaadu ay si buuxda ula jaan qaadayaan Xeerarka ADA iyo heerka caalamiga ee la aqoonsan yahay ee WCAG 2.0 / 2.1 heerka helitaanka degelka;
Ka raadi talo kooxaha u doodista dadka indhoolayaasha ah ama aragga naafada ka ah, sida kuweena oo kale. Way bixin karaan la-tashiga websaydhka, xisaabinta, iyo marin u helida qalabka kaa ilaalin kara u hoggaansamida;
Ku dhiirigali codbixiyaashaada iyo abuurayaasha maaddooyinka inay horumariyaan boggaaga adoo:
Badhamada calaamadaha, xiriiriyeyaasha iyo sawirrada oo leh sharraxaad qoraal ah, oo loo yaqaan tags alt;
Dheellitir naqshadaha si midabada hore iyo midabku ay ugu filnaadaan iska;
Hubso in websaydhkaagu si fudud loo isticmaali karo iyadoo la isticmaalayo a interface keyboard.
Isticmaal tababar bilaash ah iyo ilaha internetka si aad ugu sii tiirsanaato sharciga.
Iskaashi lala yeesho ururada kale iyo ganacsiyada, adoo si wadajir ah u ballan qaadaya inay ka dhigaan shabakadahaaga kuwo marin u heli kara dadka aragga naafada ka ah marka la gaaro waqtiga kama dambaysta ah ee aad isla meel dhigteen
Ficilladani waxay uga faa'iideystaan ​​ururada siyaabo badan: adoo ka wada qayb qaadanaya, waxaad ku martiqaadeysaa macaamiil badan iyo taageerayaal adoo adeegsanaya websaydhkaaga - albaabka hore ee ururkaaga. Markaad hogaamiso, waxaad hagaajineysaa aragtida dadweynaha; qiimahaagu wuu kordhayaa markaad abuurto fursado badan oo marin loogu helo. Taasi waa sababta Miami Lighthouse ee Indhoolayaasha iyo Araga naafada ka ah wuxuu ahaa midkii ugu horreeyay ee soo bandhiga ganacsiyada iyo shirkadaha dalka oo dhan la-talinta websaydhka si loo hubiyo u hogaansanaanta ADA.
Ugu dambeyntii, tani waxay ku saabsan tahay sameynta waxa saxda ah. Kordhinta marin u helidda, waxaad u hoggaansameysaa sharciga oo waxaad hubineysaa in dadka - iyada oo aan loo eegin awooddooda - la siinayo fursad la mid ah kuwa kale. Kaliya maahan cadaalad, waa asal ahaan Mareykan, ganacsiyadeena, hay'adaha dhaqanka iyo xitaa xiddigaha waa weyn sida Beyoncé waa inay xusuustaan ​​taas. Loo dhan yahay maahan oo kaliya a wanaagsan wax - waa tan xaq u shay.
Tags: ADAAmerikanka naafada ah ayaa wax ka qabtaindho la'aandacwadaragga liita
Virginia Jacko Thursday, April 25, 2019 Thursday, April 25, 2019
Virginia Jacko waa madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee Miami Lighthouse ee indhoolayaasha iyo araga naafada ka ah kaas oo sanadkasta badala nolosha in kabadan 75,000 oo qof asaga oo tusaya sida ay suuragal u tahay in wax lagu arko indho la'aan.
Sideed U Suuqgeynaysaa Joogtaynta iyo Kala-duwanaanta Calaamaddaada?
Raadi Xarunta Culeyska ee Naqshadeynta Soo Bandhigida Weyn